Nahoana no Tiako ny Norooz? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Marsa 2015 15:50 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Ελληνικά, Nederlands, Español, 繁體中文, 简体中文, Deutsch, English
Nosoratan'i Tori Egherman, Mpandrindra Fandaharana ao amin'ny Arseh Sevom. Nivoaka voalohany tao amin'ny habaky ny Arseh Sevom ny dika voalohan'ity lahatsoratra ity.
Raha te-hahafantatra bebe kokoa momba ny fomba amam-panao Norooz ianao, hanome valinteny an-jatony ny fikarohana tsotra amin'ny aterineto. Manana tari-dalana PDF ho an'ny mpanabe ny Oniversite Harvard. Manome ambangovangony momba ny Sizdeh Bedar, fitsangatsanganana izay famaranana ny roa herinandron'ny fety Norooz.amin'ny fomba ofisialy ity rohy ity